Darkfang Castle Guide / Shadowfang mitazona mahery fo | Cataclysm, tranomaizina | WoW Guides | WoW Guides
Darkfang Castle Guide / Shadowfang mitazona mahery fo
Wow mpitari-dalana | | taorian'ilay loza, Tranomaizina
Tranobe iray ary trano an'i Baron Silverharm, Castle Darkfang dia lasan'ny hadalan'i Archmage Arugal sy ny majika maizina izay nitondra an'i Worgen tany Azeroth. Taorian'ny nandresen'ny mahery fo mahery an'i Arugal dia nilaozana ilay trano mimanda… fa tsy naharitra ela. Lord Godfrey, mpamadika ny Gilneans sy Forsaken dia mitoetra ao anaty trano mimanda miaraka amin'ny mpiambina azy.
Ity trano-maizina any amin'ny Ala Argenteos ity dia manana fahasarotana kely raha oharina amin'ireo sisa maherifo an'ny Cataclysm. Raha sendra olana ianao, dia mety ny mitondra olona afaka mifehy zavaboary tsy maty.
Asphyxiate: Baron Ashbury dia manomboka mamono ny fahavalo rehetra eo akaiky eo miaraka amin'ny Shadow, miatrika fahasimban'ny Shadow isaky ny segondra.
Endrika arkanjely mainty: Baron Ashbury dia mamoaka ny heriny rehetra ary maka endrika arkanjely malahelo.
loza: Baron Ashbury dia mamoaka ny tena heriny ary mitondra Loza ho an'ny fahavalo rehetra eo akaiky eo, miatrika eo amin'ny 4,875 sy 5,125 isa ny fahasimban'ny Shadow isaky ny segondra.
Fanaintainana sy fijaliana: I Baron Ashbury dia mamely ny fanaintainana sy ny fijaliana amin'ny tanjona kendrena, ka miteraka fahasimban'ny aloka mitombo isaky ny 0.5 seg!
Nahemotra ny famonoana: Malahelo anao i Baron Ashbury, saingy mba hahafahany manohy manisy ratsy anao ihany! Manasitrana ny fahavalo rehetra akaiky sy mpiara-dia aminy 10% isan-tsegondra.
Fanaintainana mahatsiravina: Ankafizin'i Baron Ashbury ny famelezana ny fanaintainany ireo niharam-boina, fiatrehana teboka 10,000 ny fahasimban'ny aloka ary ny fitomboan'ny fahasimban'ny aloka 20% nandritra ny 2 minitra. Miangona izy io.
Alohan'ny hanombohana ny ady dia tsara ny manadio ny efitry ny fahavalo. Ady mafy dia mafy ho an'ny mpanasitrana izy io ary koa misy takiana DPS voafaritra.
Mandritra ny tolona dia handefa tsikelikely izy Fanaintainana mahatsiravina noho izany, isaky ny mandeha ny fahaiza-manao dia hanimba bebe kokoa.
Ny iray amin'ireo fahaizanao lehibe dia Fanaintainana sy fijaliana, izay fahasimbana rehefa mandeha ny fotoana nampitaina tamin'ny mpikambana fety sendra nandany 7 segondra. Isaky ny segondra dia mandeha dia hitombo hatrany ny fahavoazana ary hahafaty ny mpikambana ao amin'ny antoko misy anao raha tsy hoe manelingelina azy ianao alohan'ny hitrangan'izany. Na ahoana na ahoana, dia tsy maintsy ny mpitsabo manaisotra ny vokany avelany.
Ny fahaizany mampidi-doza indrindra dia ny Asphyxiate. Hanaitra ny fety manontolo izany ary hampihena ny fahasalaman'ny antoko manontolo ho salama 1%. Vantany vao manomboka mampiasa ianao Nahemotra ny famonoana izany dia hanasitrana na ny vondrona na ny tenany. Soso-kevitra ny hamerenana ny fahasalamana amin'ny ambaratonga azo ekena fa tsy maintsy tapakaina haingana izy io mba tsy hanasitrana be ny sefon'ny raha tsy, Fanaintainana sy fijaliana hamono antsika rehetra io avy eo. Ny mpitsabo dia tsy maintsy mihevitra fa mamela anao hanana fahasalamana 1 i Choking, manana ny fahasalamana voalohany anananao ianao, na dia tsara aza ny mampiakatra ny fahasalaman'ny vondrona hisorohana azy ireo tsy ho faty amin'ny fahaiza-manao iray. tsy ilaina fa hahatratra 100% izy ireo.
Raha vao mahatratra fahasalamana 20% izy dia hiova amin'ny endrika Dark Archangel ary hanomboka hampiasa loza mandra-pahafatiko. Amin'ity fotoana ity dia mivadika hazakazaka DPS sy fanasitranana izy io. Fotoana izao hampiasana ny fahaizana manokana rehetra.
Baron Silverblade / Baron Silverlaine
Voaly voaozona: Ny voaly vozona dia 24,375 hatramin'ny 25,625 fahasimban'ny aloka ary mampihena 75% ny vokatra fanasitranana mandritra ny 8 segondra.
Antsoy ny fanahy Worgen: Baron Silverblade niantso ny fanahin-jaza taloha hanampiana azy!
Baron Silverblade no tompon'ny Darkfang Castle taloha ary iray amin'ireo boss tany am-boalohany sisa tavela.
Matetika hanomboka Voaly voaozona amin'ny mpikambana ao amin'ny antoko rehetra, mampihena ny fanasitranana rehetra voaray hatramin'ny 75%. Ireo mpanasitrana dia tsy maintsy manala avy hatrany izany vokatra izany ary manasitrana faritra manasitrana ny fahasalaman'ny antoko.
Isaky ny fahasalamana 25% dia hiantso fanahy hafahafa Worgen tsy maintsy vonoin'ny antoko haingana izy. Raha nanao an'io trano-maizina io tamin'ny endriny voalohany ianao dia mety hahafantatra ny sasany amin'ireo sefo.
Ankoatra io dia tsy sarotra mihitsy ny ady ary tsy tokony hanana olana amin'ny famongorana ny Baron ianao.
Commander Valleyfont / Commander Springvale
fanimbazimbana: Fandotoana ny tany ambanin'ny tongotr'ilay mpandatsaka azy. Ny sandrin'ny maty dia manimba sy manakana ny fivezivezena ataon'ny fahavalo any amin'ny faritra 50%.
Fitokonana Maleficent: Mameleza fahavalo amin'ny fahavoazan'ny fitaovam-piadiana 100%, miteraka fiampangana ny Unholy Power.
Ampingan'ny mpamadikaMamoaka ny hery tsy masina amin'ny endrika torrent energie ao anaty kôn eo alohan'ny caster, miatrika 95-105 fahasimban'ny ala isaky ny 0.5 segondra.
Teny mahamenatra: Mampiasa hery tsy masina hamelezana ny fahavalo marary mafy, mampiditra 5% ny fahasalamana faratampony lasibatra isaky ny 3 segondra. Maharitra mandra-pahafatin'ny Commander na lasibatra.
Tena sarotra ity lalao ity raha tsy manana fitaovana firy ianao.
Eo akaikiny, dia hahita Mpiandraikitra iray mijaly sy Kustodiana mitaraina isika. Ianaro ny endrik'izy ireo satria tsy maintsy hamono azy ireo imbetsaka ianao. Ireo dia manome Fampaherezana tsy masina, manasitrana ny boss amin'ny 4% amin'ny fahasalamany tanteraka. Raha mbola azo atao dia tokony tapahina io fahaizana io. Mba hanampiana anao dia azonao atao ny mifehy ny iray ary mamono ny iray hafa. Ireo mpilalao manana laharana dia tsy maintsy manalavitra ireo fahavalo ireo mba tsy hanelingelenan'ny Hiakiakan'ny lasa.
Ny tanky dia tokony hiala tsy tapaka amin'ny fanimbazimbana (mitovy amin'ny a Knight Knight) hialana amin'ny fahasimbana ary, ho fanampin'izay, tazomy hatrany amin'ny vondrona ilay lamosinao hialana Ampingan'ny mpamadika misy fiantraikany amin'ny sisa amin'ny vondrona.
Manjary hazakazaka DPS ny Combat amin'ny fotoana anaovany izany Teny mahamenatra. Ity vokatra ity dia tsy azo esorina ary tsy ho ela dia ho lasa olana. Raha hitanao fa olana izany dia tsara ny hamono ny manamboninahitra sy ilay mpiambina hatramin'ny 40%, amin'izay fotoana izay dia hofehezintsika izy ireo raha afaka mampiasa sy ny arsenalantsika manontolo hamaranana ny Komandà.
Vary mangatsiaka: Ny sombin-dranomandry dia mipoitra amin'ny lafiny rehetra, miatrika fahasimban'ny Frost ary mamorona vaingan-dranomandry izay mitaky fahavoazana fanala.
Mamorona fanala mifangaro: Miantso fifangaroan'ny ranomandry izay mifandraika amin'ny fahasimban'ny Frost ary mampihena ny tany, manimba ny fahavoazan'ny fahavalo rehetra ao anatin'ny 15 metatra miala ny tanjona.
Mamorona fangaro misy poizina: Mihazona fangaro misy poizina amin'ny lasibatra sy ny fahavalo manodidina, ka 12,000 no naratra. fahasimbana voalohany ary mitsofoka ao amin'ny hodiny, miatrika fahasimbana 5,700 6,300 ka hatramin'ny 2 isaky ny 40 segondra ary mampihena XNUMX% ny hafainganam-pandehan'ny hetsika.
Lord Walden dia hampiditra potion isan-karazany eo ambonin'ny vondrona misy anay. Ny tsirairay amin'ireo potion ireo dia samy hafa ny vokany.
Ny voalohany dia ny Frost Mix. Izy io dia mifehy ny fahasimban'ny faritra eo afovoan'ny lasibatra lasibatra ka io mila mijanona misaraka ianao hampihena ny fahasimban'ny vondrona raha azo atao.
Ny faharoa dia ny Poisonous Mix izay mampihena ny hafainganam-pandehantsika ary manimba ny fahasimbana isaky ny roa segondra. Tsy azo sorohina izany fahasimbana izany ary tsy maintsy fantatry ny mpitsabo io ody io.
Ny fifangaroana mampidi-doza indrindra dia ny Toxin Mistery misy vokany telo mety hitranga. Raha miseho ny setroka maintso dia tsy maintsy mihetsika tsy an-kijanona ny tsirairay satria marary raha mbola eo isika. Raha mifanohitra amin'izay no miseho ny setroka mena dia tsy maintsy mangina ny tsirairay raha tsy izany dia ho faty isika. Ny fifangaroana hafa azo atao dia volomboasary, izay hiatrika fahasimbana kely nefa hampiakatra 100% ny voka-dratsin'ny fitokonantsika. Misy mahita jiro fifamoivoizana eto ve?
Mandritra ny ady iray manontolo no hampiasainy Vary mangatsiaka, tena mitovy amin'ny ady amin'ny Anub'arak ao amin'ny The Test of the Crusader ary, tsotra, tsy maintsy miala isika mba tsy ho voahombo.
Bala voaozona: Ny afo dia nanozona bala tamin'ny fahavalo tsy nahy, nahatratra 47,500 52,500 ka hatramin'ny 15 ny fahasimban'ny aloka. Ho fanampin'izany, ny tanjona dia hitondra fahasimbana rehefa mitombo mandritra ny XNUMX segondra.
Fery mety maty: Mitondra fahavoazana 31,500 isa isan-tsegondra ny fahavalo, mamela azy ireo maratra, mampihena ny fahombiazan'ny fanasitranana 10% mandritra ny 8 segondra.
Barrage basy: Mandrehitra bala tsy tapaka amin'ny bala ao anaty kônô eo alohan'ny Lord Godfrey. Ny fahavalo ao amin'io faritra io dia mandray fahasimbana 150 Shadow isaky ny segondra ijanonany ao anatiny. Maharitra 6 segondra.
Antsoy ny fanahy mahery mandatsa-dra: Miantso Ghoul mpandatsa-dra isaky ny 0,5 seg mandritra ny 3 seg.
Nanantena ny hahita Arugal ve ianao? Tsia! Lord Godfrey no tompon'andraikitra farany amin'ity trano-maizina ity ary tsy sarotra ny ady.
Ireo mpitsabo dia tsy maintsy mahatsapa ny vokany avelany Bala voaozona izay mahatonga antsika hahazo fahasimban'ny aloka izay mitombo ihany koa rehefa mandeha ny fotoana. Tsy maintsy esorina eo no ho eo izy, ho tsapanao faingana satria hilatsaka tampoka ny fiainan'ny mpilalao.
Mandritra ny ady dia hiantso ny sasany ghoul izay ho faty mora foana amin'ny fanafihana any an-toerana ka tsy hanahy be loatra isika.
Ny fahaizany mampidi-doza indrindra dia Barrage basy Ary amin'ny fotoana hanombohany mitifitra dia tsy maintsy mifindra isika raha tsy te-handray fahavoazana be.
[fanamarihana] Ao amin'ity tranomaizina ity dia misy zava-bita izay afaka manampy anao hahazo a Drake vato volkanika. Raha mila fanampiana kely ianao hanaovana ny zava-bita dia aza misalasala mitsidika ny anay Torolàlana ho an'ny mahery fo Cataclysm. [/ fanamarihana]
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: WoW Guides » Tranomaizina » taorian'ilay loza » Darkfang Castle Guide / Shadowfang mitazona mahery fo
Torolàlana firavaka 1-525
Ghostcrawler dia miresaka momba ny fandrahonana sy ny tanky